६९ प्रतिशत फलोअरले इन्स्टाग्राम पोलमा मर्नुपर्छ भनेपछि मलेशियामा युवतीले गरिन् आत्महत्या
बिहानको ०२ : ५९
एजेन्सी । मलेशियामा एक १६ वर्षीया युवतीले इन्स्टाग्राम पोलका कारण आफ्नो ज्यान लिएको खबर गरिएको छ । उनले आफ्नो इन्सटाग्राममा ‘मलाई जीवन कि मृत्यु भनेर छनोट गर्न मद्दत गर्नुस’ भनेर एउटा पोल राखेकी थि...
एजेन्सी– मलेसियामा एक १६ वर्षीय किशोरीले सामाजिक सन्जालमा मानिसहरुको राय लिएर आत्महत्या गरेकी छिन् । उनले आफ्नो इन्स्टाग्राममा साथीहरुसँग सोधेकी थिइन् कि के उनले आत्महत्या गर्नु पर्ला ? सोमबार राखि...
imagekhabar.com . ३ महीना अघि
मलेसिया, जेठ २ । सामाजिक सञ्जालले कतिपयलाई एक्लोपनबाट मुक्ति दिने गरेको पाइन्छ भने कतिपयको जीवन बर्बाद भएको उदाहरण पनि छन् । मलेसियामा एक किशोरीका लागि इन्स्टाग्राम नै मृत्युको कारक बन्यो । समाचार...
इन्स्टाग्राममा मत सर्वेक्षण गरेर किशोरीले गरिन् आत्महत्या
फोटो शेयरिङ एप इन्स्टाग्राममा मत सर्वेक्षण गरेर एकजना किशोरीले आत्महत्या गरेकी छन् । मलेसियाकी एक १६ वर्षीया किशोरीले आफ्नो इन्स्टाग्राममा आफ्ना फलोअर्ससँग मत सर्वेक्षण गरेकी थिइन् । मत सर्भेक्षणम...